Greetly · Digital Receptionist - Izinhlelo zokusebenza ku-Google Play
Greetly · Digital Reception · Digital MailroomIbhizinisi
Londoloza AdminUTES yakho! Administrivia yayiyisiqalekiso zonke ehhovisi. Lula emsebenzini wakho. Ake Greetly yokubingelela izivakashi futhi wamukele ukudiliva ukuze ukwazi ukwenza okwengeziwe!
Greetly iyona emangalisayo ngokwezifiso receptionist digital. isofthiwe reception ukuphathwa Greetly sika uzohlola ezivakashini, ukuthola ukudla iphakethe ukudiliva, akhiphe NDAs, ukubhalisa umcimbi ababekhona kanye nokunye okuningi. Greetly ithumela osheshayo izaziso reception. Igcwele izici kanti ilula ukuze isethaphu nokusetshenziswa. Greetly iyoba oyinhloko umkhiqizo ithuluzi ehhovisi yakho.
Ungezi uzosebenzela ukuxazulula izinkinga ezithakazelisayo. Ukuze wenze empilweni zabantu kangcono. Hhayi ukuze yizinkulumo ethola Bob kusukela kwasemini ukuze ezimali sika. Ake Greetly ukukwenza. Nge Greetly, isivakashi inqubo yokubhalisa kuyashesha futhi kulula. Futhi singalokotha yini sithi ... FUN!
Umamukeli wakho DIGITAL
Greetly kuyinto 100% elimhlophe-abhalwe electronic isivakashi ukungena ngemvume lokusebenza. Izivakashi ukubona kuphela logo yakho nombala brand. Cabanga ngalokho izivakashi zakho khona oyothi: "Hawu, inkampani yakho ngempela tech high, thina umxhwele receptionist uhlelo lwakho virtual". Qalisa Greetly namuhla futhi wenze kwansuku Happy Professionals Administrative Day.
Dinga izivakashi isayine NDA? isheke Greetly sika kuhlelo eseke ya 'simboziwe. Udinga isofthiwe umcimbi lokubhalisa? Awuboni-ke, wazi ukuthi ubani da'house. Lots of iphakethe ukudiliva? Uqedile. luhlobo Secure? Greetly ungathatha isithombe zonke isivakashi futhi uprinte isivakashi amabheji ukuze izivakashi baziwa shazi.
ABANGENA AKUNAMKHAWULO KANYE YOKWAMUKELA USAGE
I Greetly iPad uphawu kuhlelo ngeqholo inikeza digital isivakashi ukuphathwa izinhlangano ezisukela tech zokuqala ezingenzi inzuzo izinhlangano emhlabeni wonke. Ingabe thina ukubalula ukuthi izikhala okwabelana software yethu? Kungakhathaliseki ukuthi mincane noma isizinda sakho umsebenzi kanjani, Greetly inikeza angenamkhawulo isivakashi ukubhaliswa bese uhlola izaziso.
Greetly ithumela osheshayo izaziso reception abasebenzi ngekholi yezwi, wombhalo, i-imeyili kanye Ukuxega. Abasebenzi Uyazikhethela okuyinto reception izaziso bafuna ukuthola. Nanoma yini okuthandayo, Greetly usebenza ngokushesha ... Kube kwahamba.
Yenza indawo yokulinda isipiliyoni ukhululekile yezivakashi. Ivumela izivakashi ukuhlola kanye nolimi azikhethele lona. phambi edeskini uphawu Greetly sika kuhlelo kungenziwa izilimi 10 asetshenziswa.
DIGITAL isivakashi ILOGU
Ufuna ukuxhumana izivakashi ukubabonga ngokubamba ozayo? Ingabe into iya ulahlekile? Kudingeka wazi ukuthi bangobani kwaba akusayithi ngesikhathi abantu baphume noma sokuprakthiza? Greetly sika isivakashi isheke e lokusebenza kuhlanganisa evikelekile cloud-based isivakashi log. Finyelela, buka bese ulanda uhlu lwakho isivakashi nini, noma kuphi.
OTHANDEKAYO BY INDUSTRY ABAHOLI
Siyakuthanda abasebenzisi bethu. Futhi abasithandayo. Vele ucele abangane bethu at Garmin, Lennar Homes, Vita Coco, I National Science Foundation, Bond Collective, ezikhuthele Office nabanye abaningi kangaka sike uphelelwa iminwe ukuzibala zonke.
Zama Greetly futhi nesimanje ehhovisi reception. Qalisa uhlolo lwakho lwamahhala namuhla https://www.greetly.com.
Okuningi ngo-Greetly · Digital Reception · Digital Mailroom
Kwethulwa Greetly Digital Mailroom! Mahhala iphakethe lwamakholi & umsebenzi izaziso.
Ukuhlela uhlu kanye memos esihlahleni-isakhiwo ne ISIZINDA collapsable.
Wingman inikeza elawula ukufinyelela 6 Series futhi MixPre-Series imikhiqizo.
Hlala uqaphele futhi kulondeke nge top ngokufingqiwe izindaba Cyber, amathiphu kanye okwengeziwe go!
Security Digital nangokwenyama abantu engozini. (BETA)
I-FDLE Mobile App inikeza ukufinyelela okulula kumasevisi okukhuthaza ukuphepha komphakathi